Ny Herinandro Tato Amin’ny Global Voices Podcast : Korontanina Ny Filaminana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2016 4:38 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, বাংলা, Español, Swahili, English
Hanao topimaso ireo tantara vitsivitsy izay nivoaka vao haingana avy ato amin'ny famoaham-baovao Global Voices Ny Herinandro Tato Amin'ny Global Voices Podcast . Amin'ity herinandro ity isika hiresaka amin'ny tonian-dahatsoratra mpiara-miasa RuNet Echo teo aloha Tanya Lokot sy ny tonian-dahatsoratra mpiara-miasa RuNet Echo amin'izao fotoana izao Isaac Webb momba ny fipoahan'ny fihenjanana vao haingana teo amin'i Okraina sy Rosia sy ny fomba fijerin'ny Okrainiana mikasika ny toe-draharaha.
Hitantara anao tantaran'olon-tsotra miatrika ny tsy rariny any Singapaoro, India sy Brezila ihany koa izahay. Ary avy eo hiverina any Okraina handre ny tatitra fohy avy amin'ny tale mpanatanteraky ny Global Voices Ivan Sigal momba ny filaminana mampiahiahy ao an-tanànan'ireo Okrainiana izay tsy lavitra ny vava ady.
Isaorana be dia be i Raphael Tsavkko Garcia [mg], Rezwan [mg], Mong Palatino [mg] ary ireo mpanoratra, mpandika lahatsoratra ary tonia rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fizaran-tantara ity.
Amin'ity fizaran-tantara Ny Herinandro Tato Amin'ny Global Voices ity izahay, manasongadina ireo hira nahazo lisansa Creative Commons avy amin'ny Arisivan'ny Mozika Malalaka (Maimaim-Poana), ka tafiditra amin'izany ny Please Listen Carefully avy amin'i Jahzzar; In The Darkness (No Voices) avy amin'i VYVCH; Your Pulse avy amin'i Little Glass Men; Long White Cloud avy amin'i krackatoa; Golden avy amin'i Little Glass Men; Waking Stars avy amin'i Kai Engel; ary Lovely, Lonely (Instrumental) avy amin'i YEYEY. .
Avy amin'i Alice V/Democratize ny sary nasongadina amin'ity fizaran-tantara ity. Nahazoana alalana.
1 andro izayKiobà
12 Septambra 2015Azia Atsinanana
Tsaroan'ny Indoneziana mpikatroka i Munir Said Thalib, ilay mpiaro ny zon'olombelona nisy namono